Indawo efanelekileyo yokuhlala kufutshane neStockholm Centrum - I-Airbnb
Indawo efanelekileyo yokuhlala kufutshane neStockholm Centrum
Igumbi lakho lokulala e iflethi eqeshisayo sinombuki zindwendwe onguOleg
UOleg ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-90% yeendwendwe zakutshanje.
Wamkelekile kwigumbi lam elipholileyo- yimizuzu esi-7 kuphela kunye nomgaqo ongaphantsi okwisiXeko saseStockholm. Ifakwe kwiZiko leSolna Huvudsta elineekhefi kunye nerestyu. Le ndawo ibonelela ngendalo kufutshane kunye neendawo zokuhamba zechibi ezibukekayo. ISolna yi-hip neigborhod ezayo yaseStockholm etsala abantu ngenxa yeendawo ezintsha ezinje ngeMall yaseScandinavia kunye neFriends Arena ebamba iminyhadala emininzi unyaka wonke.
Igumbi elipholileyo, elicocekileyo kwiflethi enamagumbi amabini liyavunyelwa. Isondele kakhulu kwisikhululo sikaloliwe saseHuvudsta.Kuphela yimizuzu eyi-1.5 ukuya kwikhaya lam ukuya kwindlela engaphantsi komhlaba kunye nemizuzu eyi-7 ukuya kwisikhululo esiphakathi saseStockholm. Kumgama omfutshane ukusuka kwindlu yam ebekwe kwindawo enomtsalane kakhulu yepaki enemithi, ichibi kunye namadada
Umbuki zindwendwe ngu- Oleg
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Solna